ပန်ဒိုရာ: ဘ၀အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော စာတစ်အုပ်
Posted by pandora at 8:43 AM
cbox မတွေ့တော့ပါလား။ banner အသစ်ကလှတယ်။
“လောကရဲ့ သင်္ကေတနဲ့ ဖန်ဆင်းမှု” လို့ ပြောရင် ရမလားဗျာ။
မင်္ဂလာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။ :P
bro, nice authors ....and nice idea
ဆီဗုံးဖြုတ်ထားလို့ ကွန့်မန့်ထဲ ၀င်အော်သွားတယ် ဘာဖစ်လဲ အာဘွားး အဟက်ဟက် ချစ်ပန် အနော်လဲ တရုတ်သိုင်းဝတ္ထုစဆုံးကို တူနယ်တန်းကထည်းကခိုးဖတ်တာဗျ အဟဲဟဲ :P
ပန်ပန့် ဆီဗုံးပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတာ။ နောက်မှ ရေးထားတာ တွေ့တယ်။ စာအုပ်လင်ခ့်အတွက် ကျေးဇူး ပန်ပန်။ အားရင် ကြိုးစားဖတ်မယ်။ ခုတော့ အားသေးဘူး။
ဖတ်ကြည့်ဦးမယ် ငါ့အစ်မကို ဘာလို့ လွှမ်းမိုးလဲဆိုတား)
ပန်ဒိုရာရဲ့ ကဗျာများ၊ စာများကလည်း လာရောက်ဖတ်ရှုသူအပေါ်မှာ တစုံတရာ သက်ရောက်မှု ရှိပါသဗျား။
ကောင်းသောနေ့ပါ.. နေကောင်းတယ်နော်.. စီဗောက် ဘာလို့ဖြုတ်..
မကြီးပန်ရေ ကွန်နက်ရှင်ဒေါင်းနေလို့ အခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ဦးဦးဖျားဖျား ကွန့်မန့်ရေးမလို့ :) ရေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
I expect to read more about this story, "A Tale of Two Cities",..Brief translation likeasummary in Burmese... if possible..
ကောင်းကင်ကို . ကိုမေတ္တာ. ဒိုင်ယာရီ. မင်းတစေ.၊ မယ်မောင်၊ ခဲအော့စ်၊ မမေ၊ မျှားပြာ၊ ကိုပေါ၊ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်. ညိမ်းညို၊ ကိုမောင်ရင်တို့ ကျေးဇူးပါ။ ကိုမောင်ရင် တောင်းဆိုထားတဲ့ အတိုချုပ် ဇာတ်လမ်းကို ရေးပေးပါမယ်။